सदावहार साडी - Karobar National Economic Daily
query_builderAugust 10, 2017 10:18 AM supervisor_accountजुनु भट्टराई visibility2478
काठमाडौं : ‘जब म आफूलाई ‘सेक्सी’ देखियोस् भन्ने चाहन्छु, त्यो बेला मेरो पहिलो रोजाइको कपडा भनेकै साडी हुन्छ ।
मलाईमात्र होइन, मेरा फ्यान फलोअर्सले पनि मलाई साडीमा निकै सेक्सी देखिने प्रतिक्रिया दिँदै आउनुभएको छ,’ एक कार्यक्रममा बलिउडकी नायिका सुस्मिता सेनले आफूले लगाउने साडीको बारेमा यसरी कमेन्ट गरेकी थिइन् ।
सुस्मिता सेन बलिउडकी नायिकाहरूमध्ये धेरै साडी लगाउने नायिकाको रूपमा पनि देखिन्छन् । सुस्मिता मात्र होइन, नायिका विद्या बालन पनि एक समय हरेक कार्यक्रम तथा सार्वजनिक समारोहमा प्रस्तुत हँुदा प्रायजसो साडीमै देखिने गर्थिन् ।
‘डर्टी पिक्चर’ फिल्ममा आफ्नो परिवर्तित छवीमा प्रस्तुत भए पनि अझै उनका फ्यान फलोअर्समध्ये धेरैले नायिका बालनलाई पहिलेकै रूपमा देख्न चाहेकाले पुरानै छविमा प्रस्तुत हुन सुझावसमेत दिँदै आएका छन् । हिन्दी टेलिसिरियलमा अभिनय गर्ने अधिकांश कलाकारलाई पनि कार्यक्रममा साडीमै प्रस्तुत भएको देखिन्छ ।
पछिल्लो समयमा हलिउडमा मात्र होइन, नेपाली सिने जगतका हिरोइन तथा कलाकारहरूमा साडीप्रतिको मोह कम छैन । साडीको सौखिन को नेपाली महिला नहोला र ? यस्तैमध्येकी एक हुन् नेपाली सिने जगतकी लोकप्रिय कलाकार सरिता लामिछाने । प्रायजसो सिनेमा जगतका कार्यक्रममा होस् या अन्य कुनै सभा समारोहमा उनी प्रायः साडीमै उपस्थित देखिन्छन् ।
नयाँ पुस्ता आधुनिक फेसनमा आकर्षित भइरहेका बेला उनको साडी प्रेम किन त ? “साडी सोभर ड्रेस हो अनि सदावहार पनि । साडी लगाउँदा आफूलाई निकै सभ्य र सालिन महसुस हुन्छ । त्यसैले म प्रायः साडी लगाउन रुचाउँछु,” उनले भनिन् ।
सरितालाई साडी यति मन पर्छ कि आमा, दिदीबहिनीको राम्रो साडी देखे लगाइहाल्ने गरेको सुनाउँछिन् । आफूले लगाउने साडीका लागि ५ सयदेखि ६० हजारसम्म हालेको उनको अनुभव छ । प्रायः आफूले लगाउने साडी अरुभन्दा भिन्नै होस् भन्ने सोचले डिजाइनरलाई आफूले डिजाइन दिएर बनाउने गरेको उनले बताइन् ।
“म आफूले प्रयोग गर्ने साडी अरुभन्दा फरक होस् भन्ने चाहन्छु र सोहीअनुसार आफूले डिजाइन गरेका साडी लगाएर हिँड्दाको सान पनि त अर्कै हुन्छ नि हैन र ? तर यसको मतलब बजारमा पाइने साडी किन्दिन भन्ने चाहिँ हैन है,” उनले थपिन् । सुटिङको समयमा एकैपटकमा २०÷२५ वटा सम्म साडी किन्ने गरेको उनले सुनाइन् ।
सरितामात्र होइन, हास्यकलाकार दीपाश्री निरौला पनि आफूलाई साडी निकै मनपर्ने पहिरन भएको बताउँछिन् । आफू केही मोटी भएपनि साडी लगाउँदा आफूलाई स्मार्ट देखिएजस्तो महसुस हुने उनी बताउँछिन् ।
“मलाई आफूलाई पनि साडी मन पर्छ । अरुले पनि साडी लगाएको निकै राम्रो लाग्छ,” कलाकार निरौलाले भनिन्, “साडी चोलो निकै भद्र ड्रेस हो । उत्ताउलो तरिकाले लगाउँदा सुहाउँदैन, मिलाएर लगाए मोटा पालला सबै प्रकारका महिलालाई राम्री देखिन्छ ।” साडीकै लागि भनेर बजेट नछुट्याए पनि राम्रा साडी देखे किनिहाल्ने गरेको उनी बताउँछिन् ।
“महँगो मूल्य तिर्दैमा राम्रो हुने भन्ने होइन । साडी ब्लाउजसँग मिलाएर लगाउनुपर्छ । बजारमा पाइने रिजनेवल मूल्यका साडीहरूमा पनि निकै राम्रो देखिन्छ,” उनी भन्छिन् । नयाँ पुस्ताका युवतीमा पनि कम आकर्षण छैन साडीको ।
त्यस्तैमा युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्च्व गर्दै आएकी नवनायिका सोनिया जिआर पनि आफूलाई साडीमा निकै सेक्सी देखिने भएकाले आफू धेरै साडी लगाउने गरेको बताउँछिन् । उनी आफूले लगाउने साडी अनलाइन वा युट्युबतिर हेरेर डिजाइन छनोट गर्छिन् । फेसनेबल हुन छोटा र आधुनिक कपडा नै लगाउनुपर्छ भन्ने लाग्दैन उनलाई ।
“जीउमा सुहाउने गरी लगायो भने साडीमा जति आकर्षक कुनै डे«समा देखिँदैन,” उनको दाबी छ । पहिरनको कुरा हुँदा पुरुषभन्दा महिलाको बढी चर्चा हुने गर्छ, संसारभर नै । सुन्दर महिलाको कल्पना गर्दा धेरैका आँखाअगाडि एउटा विम्ब आउने गर्छ, मिलेको शरीर, त्यसमाथि सुहाउँदो पहिरन । नेपाली महिलाको त पहिचान नै हो साडी । सम्भवतः साडी लगाउँदा कसैलाई नसुहाएको भन्ने हुँदैन । जस्तासुकै आधुनिक पहिरन लगाउने नेपाली महिलालाई ‘सबैभन्दा राम्री केमा देखिनुहुन्छ ?’ भनेर सोधे धेरैको जवाफ हुन्छ, साडी ।
कलाकार मात्र होइन, बैंकर्स, वकिल, चिकित्सक, पत्रकार व्यवसायलगायत विभिन्न पेशा अंगालेका महिलाहरूले प्रयोग गर्ने लोकप्रिय पहिरन हो साडी । फरक यति हो कसैले डिजाइनर साडी लगाउन मन पराउलान् कसैले साधारण साडी ।
महिला भन्ने बित्तिकै पहिलो पहिरनको छवि साडीमै देखिन्छ । त्यसमाथि पनि चाडपर्वमा त महिलाहरूले लगाउने विशेष पहिरनको रूपमा साडी विशेष पहिरन मानिन्छ । विवाहित हुन् अविवाहित महिलाहरूले चाडपर्व वा कुनै कार्यक्रममा के लगाउने भन्ने कुरामा पनि साडी नै धेरैको रोजाइमा पर्ने गरेको छ ।
नेपाली महिलाले पारिवारिक जमघट, विवाह तथा चाडपर्वमा सबैभन्दा बढी लाउने पहिरन हो साडी । कपडालाई शरीर ढाक्ने माध्यममात्रै मान्ने समय अब रहेन । युवा पुस्ता धेरै फेसन कन्सस भइसके । परम्परागत रूपमा महिलाले लगाउँदै आएको साडीका अहिले सयौं डिजाइन आइसके ।
“एकपटक लगाइसकेपछि अर्को डिजाइनको खोजीमा हुन्छन् ग्राहक,” ड्रिमवेयर फेशनकी सञ्चालक तथा डिजाइनर मन्जु बन्जरा ढकाल भन्छिन् । उपभोक्तामा बढेको फेसन क्रेजअनुसार नै आफू फेसनमा केन्द्रित भएको उनी बताउँछिन् । बनारसी, इम्ब्रोइडरी, रेसम, प्रिन्टेड, सिमर र सिफनका साडी उपभोक्ताले रुचाउने गरेको उनको अनुभव छ । बजारमा हजार रुपैयाँदेखि लाखसम्मका साडी पाइन्छन् । “उपभोक्ता नयाँ क्रिएसन खोज्छन् । मन परे पैसाको वास्ता गर्दैनन्,” डिजाइनर ढकालले सुनाइन् ।
बजारमा हलुका प्रकारका सिफन निकै चलेका छन् । यस्ता साडीहरू लगाउन निकै हल्का मानिन्छन् । प्रिन्टेट तथा इम्ब्रोडरी गरिएका साडी, सधैभरी सदावहार देखिने जडीका इम्ब्रोडरी गरिएका साडी चलेका छन् ।
यो वर्ष ब्रोकेटको साडी जुन सिल्क भन्दा थोरै फरक र बनारसी र सिल्कको फ्युजनमा बनेका इण्डियन साडीहरू यो वर्ष निकै चलेको छ । विशेषगरी मंगोलियनहरूले प्रिन्टेट सिफनका साडीहरू पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
व्यवसायीहरूका अनुसार तराईमा साकटनका प्रिन्टेट लेस जडित साडीहरू पनि यो वर्ष निकै चलेका छन् । ब्रोकेट जडित र स्टोन टाँसेका साडीहरू बढी मात्रामा बजारमा आएको छ । महिलाहरूले आफ्नो व्यस्तताअनुसार साडीको छनोट गर्ने चलन रहेको छ । त्यस्तैगरी साडीसँगसँगै फेसनमा गहना, चुरा र पोतेहरू निकै फेशनमा आएको छ । एउटा उमेर कटेका महिलाहरूलाई साडीको विकल्प हँुदैन ।
साडी भद्र ड्रेस हो । साडीले महिलाहरूलाई आकर्षकमात्र बनाउँदैन, साडीमा रहेका महिलाहरूप्रति पुरुषले आदरको दृष्टिले हेर्ने गरेको पाइन्छ । धेरै जसो महिलाहरू साडीमा जस्तो ‘कम्फर्ट फिल’ अरुमा नहुने समेत बताउँछन् । विदेशमा सेमिनार, कन्फ्रेन्समा जाँदा पनि महिलाहरू प्रायः साडीमै प्रस्तुत भएको देख्न सकिन्छ ।
साडी साडीप्रतिको मोह सरिता लामिछाने